बिरामी निको पारेर पठाउँदाको क्षण - Enepalese.com
बिरामी निको पारेर पठाउँदाको क्षण
इनेप्लिज २०७२ असोज १९ गते ४:०४ मा प्रकाशित
बिर्तामोड, १९ असोज । घटना गत असार १२ गतेको हो । महेन्द्ररत्न उच्च मावि बिर्ताबजारका शिक्षक हरिहर खनाल एक्कासी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे । बिर्तामोडको भद्रपुर रोडमा दुर्घटनामा परी अचेत भइ ढलेका खनाललाई तत्काल उपचारका लागि बी एण्ड सी टिचिङ हस्पिटल लगियो ।
खनालको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो । उनको मुखबाट रगत आइरहेको थियो । टाउकोमा अनि शरीरभरी चोटैचोट थियो । उनको अवस्था देखेर हस्पिटलका चिकित्सकहरु नै डराएका थिए । लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा आवद्ध खनाललाई हेर्न त्यतिबेला हस्पिटलमा घुइँचो नै लाग्यो । खनाललाई बी एण्ड सी हस्पिटलमा उपचार गराउनु हुँदैन भन्ने पनि निस्किए । कारण हस्पिटल भर्खरै सञ्चालनमा आएको थियो । सेवा सुरु गर्दैगरेको हस्पिटलमा उपचार सम्भव नहुने भन्दै खनालका आफन्त हच्किएका थिए । तर, तिनै हरिहर खनालले बी एण्ड सी हस्पिटलबाट नयाँ जीवन पाएका छन् ।
सोमबार हस्पिटलको माहोलले सबैलाई भावुक बनायो । खनाललाई डीस्चार्ज गर्ने बेलामा अस्पताल प्रशासनले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । हस्पिटल परिवारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दागर्दै भक्कानिएकी खनालकी श्रीमति आशाले सबैलाई भावुक बनाइन् । उपचारमा सम्लग्न न्यूरो सर्जन डाक्टर चन्द्रप्रकाश लिम्बूकै कारण आफ्नो पतिको ज्यान बँचेको बताउँदै गर्दा उनको गला अवरुद्ध भएको थियो । ‘हस्पिटल मेरा लागि भगवान नै सावित भयो,’ उनले भनिन् ।
उपचारमा संलग्न डा. लिम्बू पनि खनालको उपचार सफल भएकामा दङ्ग थिए । आफ्ना लागि यो भन्दा खुशीको कुरा अरु हुनै नसक्ने उनले बताए । ‘रगतैरगत थियो, १० मिनेटभित्रैमा आइसियूमा राखियो,’ उनले भने, ‘मैले आफ्नै पिता सम्झेर उपचार गरेको छु ।’ सुरुमा खनाललाई बँचाउन सकिन्छ जस्तो नलागेको अस्पतालका प्रिन्सिपल डा अमरनाथ ठाकुर पनि बताउँछन् । मेहनतले बँचाउन सकिएको उनको भनाइ छ ।
खनालका सहकर्मीहरु पनि उत्तिकै भावुक थिए । महेन्द्ररत्नकै शिक्षक भोजराज दाहालले डा. लिम्बू र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईको निकै प्रशंसा गरे । अस्पतालले आफ्ना सहकर्मीको ज्यान बँचाएको प्रति धन्यवाद दिँदा दिँदै उनको बोलि रोकिएको थियो । पिता सम्झेर खनालको उपचार गर्न उनले नै डाक्टर लिम्बूलाई आग्रह गरेका थिए । अर्का शिक्षक मोहन माहिमलाई ‘नयाँ हस्पिटलमा के नै हुन्छ र ?’ जस्तो लागेको रहेछ । तर, बी एण्ड सीमा खनालको उपचार सफल भएपछि उनले आफ्ना आफन्तलाई उपचारका लागि सिलगढी जानबाट रोकेका छन् ।
अहिले खनालको अवस्थामा निकै सुधार आएको अस्पताल निर्देशक महेन्द्र प्रसाइले बताए । खनाल दोहोरो कुराकानी गर्न भने अझै सक्दैनन् । त्यसका लागि अझै केही समय लाग्ने प्रसाइ बताउँछन् । खनाललाई परिवारले अझै हेरचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा खनालका परिवारले अस्पताल प्रशासन र उपस्थित पत्रकारलाई लड्डु बाँडेका थिए । कार्यक्रममा उनीहरुले अस्पतालका डाक्टर चन्द्रप्रकाश लिम्बू, डा. दिनेश थापा, डा. निराजन पराजुली, प्रिन्सीपल डा. अमरनाथ ठाकुर, डा. ओमप्रकाश चौधरी र कार्यकारी निर्देशक प्रसाइलाई सम्मान गरिएको थियो ।
अस्पतालका निर्देशक महेन्द प्रसाइले औचित्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रमको सञ्चालन टीका अधिकारीले गरेका थिए ।